AFHAYEENKA,SSC EE YURUB GAAR AHAAN,GARABKA XAGLA TOOSIYE OO SHIR JARAAID KU QABTEY MAGAALADA GOTENBERG EE WARANKA SWEDEN.(Hadhwanaagnews) Wednesday, October 24, 2012 Maanta oo taariikhdu tahay 24-10-2012,ayaa magaalada gotenberg ee wadanka sweden waxaa shir jaraaid ku qabtay afhayeenka ssc garabka xagla toosiye Abdirizak Aden Ali Kaneec, oo dhowaan fasax ku tagay geeska afrika.
Waxaan marka hore halkan uga hambalyeynayaa hoogaamiyaha ssc Mr.saleebaan xagla toosiye sidii geesinimada lahayd ee uu ubaaray,tugata wanaaga kudhisan,ee ku salaysan derisnimada walaalnimada.
Waxaan kaloo shacabka SSC.ka codsanayaa in kooxda fidna walaasha ee khaatumo, laga digtoonaado lagana shaqeeyo wanaag iyo horumar.
Hadaba afhayeenka ayaa mar uu la hadlayey saxaafada usheegay in SSC garabka
xagla toosiye yihiin ama ahaayeen weligood dad iyo shacab ahaanba somaliland,waxaana diyaar unahay in aanu dalkeena iyo dadkeena rer somaliland,kala shaqayno,horumarka iyo nabad gelyada khaasatan somali-land, oodhan.
Afhayeenka ayaa yiri kooxdii khaatumo bariwayn,way udhaamatay ee fidna walayaasha ahaa, markaa maanta waxaa loo bahan yahay in laga shaqeeyo nabad galyada kooxaha fidna walayasha laiska ilaaliyo.
Guntii iyo geba gebadii ayaa afhayeenku wuxuu shirkii jaraaid kusoo gaba gabeyey in fidnada iyo kooxaha dayuusbaraha ah ee ka shaqaynaya colaada dad ka walalaha ah laga digtoonaado